အလန်းစားဝတ်စုံတွေ ချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာကို ထုတ်ပြ လိုက်တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း – Cele Posts
ဖြူဖြူကျော်သိန်း ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အဆိုတော်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်သလို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုရယူထားနိုင် ဆဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူကတော့ အဆိုပိုင်းမှာပါရမီ အပြည့်ပါသလို ထူးခြားတဲ့ဖက်ရှင်အပြင်အဆင် တင်ဆက်မှုတွေကြောင့်လည်း နာမည်ကျော်သူတစ်ယောက်ပါ။
ဖြူဖြူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင်တွေကိုတေ့ာ ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်စားလေ့ရှိတာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ အမိုက်စားဝတ်စုံတွေ နောက်ကွယ်က ဒီဇိုင်နာကို ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေး လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “ဒီနေ့ကတော့ ချစ်တို့ကို ဟင်ခနဲ ဟာခနဲ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူရဲ့ Myanmar Idol ဝတ်စုံဆန်းတွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာကော်ရီးသျှတ္တရ Designer Sha Tra ရဲ့မွေးနေ့ပါရှင်… Happy Birthday, Sha Sha yay!!မွေးနေ့ရှင်ကကိုယ်တိုင် မွေးနေ့ကိတ်လေးလာပို့ပေးလို့လည်း ကျေးကျေးပါနော်” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားထား ပါတယ်။
ဒီဇိုင်နာသျှတ္တရ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ကျော် ဒီဇိုင်နာတွေထဲက တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ အတူ ဖြူဖြူကတော့ ပွဲတွေမှာ အမိုက်စားဖြစ်ပြီး ပြောစမှတ်တွင်တဲ့ ဖက်ရှင်များစွာကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူ့ရဲ့ဖက်ရှင် တွေကို ကြိုက်တဲ့သူတွေရှိကြလားနော်…
အလနျးစားဝတျစုံတှေ ခြုပျပေးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုငျနာကို ထုတျပွ လိုကျတဲ့ ဖွူဖွူကြျောသိနျး
ဖွူဖွူကြျောသိနျး ကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ဒိတျဒိတျကွဲ အဆိုတျောတှထေဲက တဈယောကျဖွဈသလို နှဈပေါငျးမြားစှာ ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခငျ အားပေးမှုကိုရယူထားနိုငျ ဆဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဖွူဖွူကတော့ အဆိုပိုငျးမှာပါရမီ အပွညျ့ပါသလို ထူးခွားတဲ့ဖကျရှငျအပွငျအဆငျ တငျဆကျမှုတှကွေောငျ့လညျး နာမညျကြျောသူတဈယောကျပါ။
ဖွူဖွူ့ရဲ့ထူးခွားတဲ့ ဖကျရှငျစတိုငျတှကေိုတေ့ာ ပရိသတျတှကေ စိတျဝငျစားလရှေိ့တာပါ။ ဒီနမှေ့ာတော့ အမိုကျစားဝတျစုံတှေ နောကျကှယျက ဒီဇိုငျနာကို ပရိသတျတှနေဲ့ မိတျဆကျပေး လာခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချမှာ “ဒီနကေ့တော့ ခဈြတို့ကို ဟငျခနဲ ဟာခနဲ ဖွဈစခေဲ့တဲ့ ဖွူဖွူရဲ့ Myanmar Idol ဝတျစုံဆနျးတှကေိုဖနျတီးပေးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုငျနာကျောရီးသြှတ်တရ Designer Sha Tra ရဲ့မှေးနပေ့ါရှငျ… Happy Birthday, Sha Sha yay!!မှေးနရှေ့ငျကကိုယျတိုငျ မှေးနကေိ့တျလေးလာပို့ပေးလို့လညျး ကြေးကြေးပါနျော” ဆိုပွီးတော့ ရေးသားထား ပါတယျ။
ဒီဇိုငျနာသြှတ်တရ ကတော့ မွနျမာနိုငျငံနာမညျကြျော ဒီဇိုငျနာတှထေဲက တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ထူးခွားဆနျးသဈတဲ့ ဖနျတီးမှုတှနေဲ့ အတူ ဖွူဖွူကတော့ ပှဲတှမှော အမိုကျစားဖွဈပွီး ပွောစမှတျတှငျတဲ့ ဖကျရှငျမြားစှာကို ဝတျဆငျခဲ့ တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဖွူဖွူ့ရဲ့ဖကျရှငျ တှကေို ကွိုကျတဲ့သူတှရှေိကွလားနျော…